မြန်မာ (မြန်မာနိုင်ငံ) မှ ဘလက်ဂျက် အမျိုးအစားကွဲများ | BlackJack77
စုံလင်သော Blackjack ။ အီတလီကိုလည်း 18 ရာစုခန့်က၎င်း၏ဖန်တီးမှုဟုဆိုကာနေကြတယ်ပေမယ့်ကမ္ဘာ့ဂန္ထဝင်အနက်ရောင်ဂျက်ဟာမှပြင်သစ်ထံမှအကြီးမြတ်ဆုံးဆုကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 21 နီးကပ်လာ Get နှင့်အိမ်ရိုက်နှက်သောကြောင့်အခုအချိန်မှာမရရှိနိုင်သမျှသောလောင်းကစားရုံဂိမ်း၏သေးငယ်အိမ်သူအိမ်သားအားသာချက်ရှိပါတယ်စဉ်းစား။
Blackjack Switch ကို
ပြီးပြည့်စုံသော Pairs Blackjack
ဂန္ Blackjack ဆင်တူစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဖြင့်သာကလာမယ့်လက်ပေါ်တစ်စုံကိုလက်ခံရရှိကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ဆန္ဒရှိနေသောကစားသမားတစ်ခြမ်းလောင်းပါဝင်သည်။ အတော်များများကကျွမ်းကျင်သူများက 6% အနီးသိသိသာသာအားသာချက်နှင့်အတူအိမျတျောကိုထောက်ပံ့ပေးစဉ်းစားပါ။
တစ်လှည့်ကွက်တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုပုံမှန်အရွယ်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ; တိုးတက်သောလောင်းကစား Blackjack ၏စားပွဲပေါ်တစ်ဦးအခြမ်းအာမခံထားခြင်းအားဖြင့်ယူရိုသန်းပေါင်းများစွာအနိုင်ရဖို့အခွင့်အလမ်း။ သင်တစ်ဦးထီပေါက်များအတွက်ခံစားချက်အတွက်ရှိပါသလား ဒီဂိမ်းကိုသင်နည်းပညာဖို့အခွင့်အလမ်းကျေးဇူးတင်စကားပေးထားပါတယ်။
Blackjack ၏ဗြိတိသျှဗားရှင်း။ ဒါဟာအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောဝေါဟာရများ, "လိမ်, Stick နှင့်ယ်ယူရန်," ကိုအသုံးပြုသည်ကိုဆင်းနှစ်ဆကဲ့သို့တူညီသောမဆိုလိုပါရာ ", Hit ရပ်နှင့်နှစ်ချက်" အစားထိုးလိုက်ပါ။ သငျသညျဗြိတိန်မှမဆိုလမ်းအတွက်ဆက်စပ်လျှင်အဲဒါကို play ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖို့မဖြစ်မနေပါပဲ။ အွန်လိုင်းဗောဆိပ်ခံ Play နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုတွေ့ကြုံခံစား, မိတ်!
လူတိုင်း Blackjack ပြောင်းလဲမည် Las Vegas မှာကြား၏ခဲ့သည်။ ကကာစီနိုလောင်းကစားရုံတို့တွင်အခေတ်မှီဖြစ်လာခဲ့သည်မှာတစ်ဦးကစိတ်ပျက်လောင်းကစားသမားသည် 1990 ခုနှစ်တွင်စိတ်ကူးတစ်ခုနှင့်အတူတက် လာ. ။ သေအချာ, ဖဲဝေနေတဲ့ခဲယဉ်း 22 နှင့်အတူသဘာဝ Blackjack မှလွဲ. အရာအားလုံး beats, ဒါကြောင့်တစ်ဦးကစားသမားစစ်မှန်စွာဂိမ်းကိုတီထွင်ယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ အများအပြား Blackjack switch ကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံရှိပါတယ်။
မူရင်း Blackjack စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအချို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်စားပွဲပိုမိုကစားသမားမောင်းထုတ်ရန်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုမှာတော့ကာစီနိုလောင်းကစားရုံကစားသမား 20 မှတ်အထိထည့်သွင်း6သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကတ်များကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါအလိုအလျောက်လက်အနိုင်ရအပါအဝင်အဆိုပါ Superfun 21 ပဏာမလက်ခံခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်နှစ်ဆ Down သည့်အချိန်တွင်မဆိုခွင့်ပြုလျက်, 21 Blackjack play!
ထိုကဲ့သို့သောဆွဲဆောင်မှုအားသာချက်များမှထမြောက်စေရန်, ကာစီနိုလောင်းကစားရုံကစားသမားတစ်ဦး6မှ5မှုနှုန်းမှာသဘာဝအ Blackjack ပေးဆောင်။ အွန်လိုင်းစအလောင်းအစားနေစဉ်ကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့ပျော်စရာလမ်းပါပဲ။ ဒါဟာအခြားအပြောင်းအလဲ, အလျော့နည်းလူကြိုက်များပျော်စရာ 21 Blackjack နှင့်အတူရောထွေးမရသင့်ပါတယ်။